UNWTO kusaremekedza Bahrain kutyora kweJIU Ethic Conditions
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » UNWTO kusaremekedza Bahrain kutyora kweJIU Ethic Conditions
African Tourism Bhodhi • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Georgia Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Investments • nhau • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Chikafu newaini mune zvematongerwo enyika zvaigara zvine basa rakakosha. Asi kutyora mitemo yakajeka neJoint Inspection Unit yeUnited Nations muUNWTO Election dinner kunonyadzisa nema andy. Chero nyika inoenda manheru eMuvhuro manheru inofanirwa kuve nemhosva pakurangana uku.
Kana chero imwe yenyika makumi matatu neshanu dzeUNWTO Executive Council Nhengo dzenyika dzikabvumira nhume yavo kana mumiriri kuenda kumanheru eMuvhuro manheru kuMadrid nhasi, zvaizoratidza kusaremekedza kusaremekedza Umambo hweBahrain uye nyika yeArabhu.
34 yenyika makumi matatu neshanu dze35th Executive Council yeWorld Tourism Organisation (UNWTO) inofanirwa kuita asi inoramba yakanyarara, pamwe ichirangana neRepublic yeGeorgia neUNWTO mukubvumira mitemo yeJoint Inspection Unit yeUnited Nations kutyorwa.
Mu 2009 the Joint Yekuongorora Unit yeUnited Nations kuGeneva yakaburitsa Sarudzo neMamiriro eVashandi veVatungamiriri Vakuru muUnited Nations System yeMasangano.
Iyo Joint Inspection Unit (JIU) yakaburitsa mitemo gumi nematanhatu inhengo dzenyika dzeUN dzinofanirwa kutevedzera ndokuidaidza gumi nematanhatu kurudziro.
Maitiro Asina Tsika
Ndima 7 inoti:
Mitemo yemitemo / inotonga yemasangano eUnited Nations anofanirwa kushora nekurambidza tsika dzisina kunaka dzakadai sevimbiso, tsitsi, kukoka, zvipo, nezvimwewo, zvinopihwa nevari kukwikwidza pachigaro chemutungamiri mukuru kana hurumende dzavanotsigira munguva
sarudzo / mushandirapamwe wesarudzo, mukudzosera mavhoti akanaka kune vamwe
eTurboNews Zvinonzi nezve kuyedza kwaMunyori weUNWTO Zurab to s kuwana mukana pamusoro pemukwikwidzi wake HE Shaikha Mai Al Khalifa ane nzira dzisina hunhu idzo dziri pfupi pane dzechioko muhomwe.
Pasina kupokana, Zurab Pololikashvili, UNWTO Secretary-General ari pachena kutyora JIU inotonga nyika yake yakabvuma kuremekedza. Hurumende yeGeorgia inotumira gurukota rayo rekune dzimwe nyika kunotora kudya kwakakosha sechikamu cheMutemo Executive Council musangano wehusiku pamberi pechisarudzo cheUNWTO Secretary-General anotevera kutyora kuri pachena kwehunhu husina kunaka. Kudya kwemanheru kwakawedzerwa chinyararire kuchirongwa chepamutemo mazuva maviri musangano wedare usati wapera, zvaisapa mukana wekuti Bahrain irambe kana kuiswa muchiitiko.
Dzvinyiriro yezvematongerwo enyika Georgia inoisa nyika kuti dzivhotere musarudzo, saka gurukota rinoona nezvekunze riri kuitisa kudya kwemanheru uku harisi kuzokundwa nderekutaura kusinga tsanangurike
Chii chinonzi Joing Inspection Unit yeUnited Nations?
Iyo Joint Inspection Unit (JIU) ndiyo yega yakazvimiririra yekunze yekuongorora nhengo yeUnited Nations system yakapihwa mvumo yekuongorora, kuongorora uye kuferefeta system-wide.
Basa rayo nderekutarisa nyaya dzinochinja-chinja uye kuita seanomiririra shanduko muhurongwa hweUnited Nations. JIU inoshanda kuchengetedza manejimendi uye kugona kwehutongi uye kusimudzira kubatana kukuru pakati pemasangano eUN uye nemamwe masangano epamukati nekunze ekutarisa. Kwemakore makumi mashanu apfuura, Chikwata chakazvipira kubatsira masangano emitemo emasangano mazhinji eUnited Nations mukuzadzisa mabasa avo ekutonga. JIU inopa rutsigiro mune inoenderana neano manejimendi basa rekutarisa maererano nevanhu, zvemari nezvimwe zviwanikwa. Mumishumo yayo nezvinyorwa, Chikwata chinoratidza maitiro akanakisa, chinopa mabhenji uye chinobatsira kugovana ruzivo mumasangano eUN system ayo atora Mutemo wawo.
Chikwata ichi chinoshanda zvine chekuita nenhengo dzemitemo uye mabharani emaasangano akasarudzika nemamwe masangano epasirese, mukati mehurongwa hweUnited Nations, vakagamuchira Mutemo wawo. Aya masangano anowanzo kunzi ari masangano anotora chikamu eJIU. JIU ine masangano makumi maviri nemasere anotora chikamu kubva muna 28 anoita basa rakakosha mukushanda kweChipenga
Chikwata ichi chinoshanda zvine chekuita nenhengo dzemitemo uye mabharani emaasangano akasarudzika nemamwe masangano epasirese, mukati mehurongwa hweUnited Nations, vakagamuchira Mutemo wawo. Aya masangano anowanzo kunzi seJIU anotora masangano (PO). JIU ine huwandu hwemasangano makumi maviri nemasere ari kutora chikamu icho chinoita basa rakakosha mukushanda kweChikwata.
Kukurudzira kubatana kukuru pakati pemasangano eUnited Nations system;
Dzvanya pano kuti uverenge iro gwaro rese, mitemo nemirau neJIU